MP Series Micro plunger pombi idiki vhoriyamu, yakanyanya kunyatsoita, hurefu hupenyu zvigadzirwa zvigadzirwa. Zvikurukuru zvemidziyo uye zviridzwa zvinoenderana nekushandisa. Inogona kuendesa mvura isingasviki 5ml. Vashandisi vanogona kutyaira yekutsika mota kuidzora, kana kusarudza imwe mutyairi. Kune mhando mbiri dzekutyaira kusarudza: 12.5-QD1 Pasina rakakiiwa-rotor (yekumhanyisa renji: 0.75-450rpm) 12.5-QD2 ine rakakiiwa-rotor (yekumhanyisa renji: 90-450rpm) Iwo maviri mamodheru ane Electromagnetic vharafu drive drive interface, iine RS485 commu ...